Warbixin: Musharaxnimada Shariif Xasan oo la ogaadey in ay tahay oo kaliya siyaasad labo Afle ah. – idalenews.com
Warbixin: Musharaxnimada Shariif Xasan oo la ogaadey in ay tahay oo kaliya siyaasad labo Afle ah.
Mogadishu (INO) – Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa bilaabay olole ballaaran uu kaga dhaadhicinayo Xildhibaanada labada Aqal ka soo galay deegaanada maamulkiisa qorshihiisa siyaasadeed ee ololaha doorashada.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegayaan in Shariif Xasan musharaxnimadiisa inay tahay mid jiliin ah oo uu ku doonayo inuu ku dhaawaco siyaasadda Guddoomiyaha baarlamaanka waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cusmaan Jawaari oo u diyaarsan inuu u tartamo mar kale xilka Guddoomiyenimo, isla markaana qorshahiisa rasmiga ah ay tahay inuu gorgortan ka sameeyo xilka guddoomiyaha baarlamaan in loo gacan geliyo siyaasiyiin jeebka ugu jira oo u diyaarsan.
Sidoo kale waxaa soo baxaya in Shariifka uu diyaarsaday siyaasi ay saaxiib iyo qaraabo dhow yihiin, kuwaasi oo uu la damacsan yahay inay qabto xilka guddoomiyaha baarlamaanka, waxaana siyaasigaasi lagu magacaabaa Shariif Maxamed Cabdullaahi oo beesha Asharaaf ka soo jeeda, oo isaga ka mid ah xildhibaanada cusub ee la doortey isla markaasna hore u soo noqdey xildhibaan.
ROME: RW Talyaaniga oo xilka ka dagaya kaddib afti uu abaabulkeeda lahaa oo uu ku fashilmay
Dhageyso+Sawiro: Beesha Tunni Oo Si Wadajir ah U Dhameeyeen Khilaafkii Soo Kala Dhexgaley..